भारतमा नक्कली नोटको बिगबिगी, अर्थतन्त्रमा भारी नोक्सानी !
काठमाण्डौ । भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) ले भर्खरै आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। जसबाट आर्थिक वर्ष २०२१–२२ मा बैंकिङ क्षेत्रले बरामद गरेका नक्कली नोटको भयावह तथ्यांक बाहिरिएको छ। बरामद नयाँ डिजाइनका ५०० रुपैयाँका नक्कली नोटको संख्या वार्षिक रुपमा १०२ प्रतिशतले बढेको छ। त्यसपछि अन्य दरका नक्कली नोट जोड्दा अ�...
हङकङ छाड्नेको लर्को: हजारौंले छाडिसके, संख्या अझ बढ्नसक्ने
काठमाण्डौ । सन् २०२२ मा हङकङ छाड्ने मानिसहरुको संख्या वृद्धि भएको छ । हङकङबासीहरुले आफ्नो इच्छाले नभई कोभिड प्रतिबन्धहरुका कारण सहर छाडिरहेको बताएका छन् । हङकङका नागरिकहरुले कोभिड प्रतिबन्धहरुलाई प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यताको क्षयिकरणका रुपमा व्याख्या गरेका छन् र यसले सहर छाड्न बाध्य पारिरहेको बताएका छन् । गत मार्च महिनामा...
भूटानमा पनि खाद्यान्न संकट, अवस्था चिन्ताजनक बन्ने डर !
काठमाण्डौ । पछिल्ला केही महिनाका दौरान विश्व घटनाक्रममा भएका परिवर्तनहरुले विश्वभरका देशहरुमा खाद्यान्नको अभाव सिर्जना भएको छ । सार्क राष्ट्र श्रीलङ्का यसअघि नै खाद्यान्न संकटसँग जुधिरहेको छ । यस्तोमा अब अर्को सार्क राष्ट्र भूटानमा पनि खाद्यान्न संकट देखिन थालेको छ । अहिले विशेष गरेर भूटानका ग्रामीण क्षेत्रहरु खाद्यान्नको अभावसँग...
अडानीको कम्पनीले भारतमा मच्चायो धमाका, बन्यो एशियाकै सर्वोत्कृष्ट आइपीओ
काठमाण्डौ । भारतीय धनाढ्य गौतम अडानीको चर्चा दिनानुदिन बढ्दो छ । अडानीको चर्चा सम्पत्ति वृद्धिका विषयमा मात्रै नभई सेयर बजारमा समेत चुलिँदो छ । हालै भारतीय सेयर बजारमा सूचीकृत भएको कम्पनी अडानी विल्मरले पर्फरमेन्सको मामिलामा नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । कम्पनीले एशियाकै सर्वोत्कृष्ट आईपीओ(एशियाज् टप परफर्र्मीङ आईपीओ)को उपाधि हात...
निर्यातमा प्रतिबन्धपछि पनि भारतमा किन सस्तो भएन गहुँको मूल्य ? यस्ता छन् कारण
काठमाण्डौ । गहुँ निकासीमा प्रतिबन्ध लगाए पनि भारतमा यसको मूल्यमा खासै घट्न सकेको छैन। निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय भएको १० दिनपछि भारतमा गहुँको थोक मूल्य प्रतिक्विन्टल भारु १५ देखि ७५ मात्रै घटेको छ। तर, खुद्रा मूल्यमा खासै कमी आएको छैन। जसका कारण बिस्कुट, रोटी, चाउचाउलगायत बेकरीका सामानको मूल्य घट्ने आशा निराशमा परिणत भएको...
किन लगायो भारतले गहुँ–चिनीको निर्यातमा प्रतिबन्ध ? यस्तो छ केन्द्रीय मन्त्रीको स्पष्टोक्ति
काठमाण्डौ । भारतको केन्द्रीय वाणिज्य तथा उद्योगमन्त्री पीयूष गोयलले डाभोसमा चलिरहेको सम्मेलनमा गहुँ र चिनीको निर्यातमा भारत सरकारले लगाएको प्रबन्धको बचाउ गरेका छन्। समाचार एजेन्सी पीटीआईका अनुसार केन्द्रीय मन्त्री गोयलले घरेलु मागलाई ध्यानमा राखेर यो कदम चाल्नु आवश्यक भएको बताए। वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमको वार्षिक बैठकमा विश्वव्यापी...
कोरोनाकालमा हरेक ३० घन्टामा एक नयाँ अर्बपति थपिए, धनी–गरिबबीचको खाडल झनै बढ्यो
काठमाण्डौ । कोरोना महामारी सुरु भएयता हरेक दिन विश्वमा एक नयाँ अर्बपति थपिएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। अक्सफार्मले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो। स्विट्जरल्यान्डको ड्याभोसमा हरेक वर्ष हुने वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमको बैठकअघि अक्सफार्मको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको थियो। प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२० यता विश्वमा ५७३...